Ciyaaro Online | Ciyaaro Online
Home - Author Archives: Ciyaaro Online
Author Archives: Ciyaaro Online
Naadiga Man Utd ayaa Rikoodh cusub oo dhanka Suuqa kala Iibsiga ah Sameyn doonta marka ay soo qaataan laacibka ugu Qaalisan Dunida ee kasoo jeeda dalka Brazil. United ayaa soo gashay loollanka loogu jiro Saxiixa laacibka dalka Brazil kaasoo qiimihiisu uu markii horeba ahaa £200m, sida uu wariyay Wargeyska the Mirror. Naadiga Red Devils waxay rajo wanaagsan ka leedahay sidoo ...
Macallinka naadiga Juve wuxuu aad u xiiseynayaa in uu ka shaqeeyo Premier League waxaana waqtiyadii ugu dambeeyay loo dhoweynayay Arsenal macallinkeeda inuu noqdo. Wargeyska The Sun ayaa sheegaya in Massimiliano Allegri uu qaban doono shaqada kooxda Emirates balse hal shuruud ayaa ku xiran: wuxuu doonayaa in loo damaanad qaado £200milyan taasoo uu suuqa soo socda la gelayo. Macallinka Talyaaniga ah ...
Faria ayaa lasoo shaqeynayay tababare Jose Mourinho wax ka badan 17 Sano. United macallin Caawiyaheeda ayaa la rumeysanyahay in uu shaqo joogto ah oo Macallinnimo helayo Mourinho ayaana ninkaan Faria ah aad u aaminsanaa ha yeeshee wuxuu qaban doonaa shaqada Arsenal. Faria ayaa leh damac sare oo uu ka leeyahay Shaqo uu isagu leeyahay maamulkeeda, sida lagu sheegay warbixin ay ...
Xulka qaranka kubadda Gacanta Soomaaliya 20-jirada iyo 18-jirada wayn ayaa maanta ka ambabaxay garoonka diyaaradaha Aaden Cadde iyagoo kusii jeeda dalka Uganda oo ay uga qayb gali doonaan ciyaaraha kubadda Gacanta Wadamada bariga iyo bartmaha Afrika (Africa Zone 5 International Handball Federation (IHF) Challenge Trophy 2018. Xulka Somalia qaybta 20-jirada waxaa ku wehliya Wadamada Kenya, Burundi,Uganda, Sudan, Tanzania , Ethiopia ...
PREMIER LEAGUE Garsooreyaasha ka shaqeynayay waqtiga dheer ee Mike Jones iyo Neil Swarbrick ayaa maanta oo Horyaalka England uu soo dhammaanayo ka fariisanaya Go’aaminta xagga garsoorka. Jones, waa 50-jir, halka Swarbrick, uu yahay 52-sano jir, waxay hadda keddib ku shaqeyn doonaan ugu badnaan Garsooreyaasha Afaraad oo garoonka ma geli doonaan. Labada sarkaalba waxay sii wadi doonaan ka shaqeynta Golaha Xirfadleyaasha ...
TEDDY SHERINGHAM ayaa soo jeediyay in Marcus Rashford uusan horumar ku gaari doonin la shaqeynta tababare Jose Mourinho haddii uu doonayo horumarna waa in uu dhaqaaqo sida uu sheegayo halyeeygii Man Utd. Manchester United weeraryahankeedu, waa 20-jir, wuxuu Fursadihiisii waayay markii kooxdu ay soo qaadatay Alexis Sanchez BishiiJanuary. Kulamo 18 ah ayuu ciyaaray tan iyo Imaatinkii Sanchez iyadoo FA Cup ...
Pochettino oo wadahadal la furay difaaca Qandaraaska diidan ee Alderweireld
MAURICIO POCHETTINO ayaa xaqiijiyay in uu wadahadal la furayo difaaca kooxda Toby Alderweireld. Laacibka dalka Belgium ee difaaca, waa 29-jir, waxaana dhaawacyo ay u diideen Sanadkan inuu Safka soo galo. Keddib markii uu ciyaaray kaliya 13 kulan oo horyaalka ah, Alderweireld waxaa lala xiriirinayay in uu kooxda ka tago, ka gadaal markii Poch uu sheegay in uusan safka hore waqtigaan ...
Dani Alves oo seegaya Koobka Adduunka 2018-ka, Sababta Ogow!!
Valverde wuxuu heli doonaa, Weerarka Adduunka ugu xooggan Sanadka Dambe
Barcelona ayaa waxay durbadiiba sii diyaarisay Safkii ugu xoogganaa ee xagaaga dambe, xataa haddii ay kooxaha kasoo horjeeda diyaar garow sameeyaan ama aysan sameyn, waxaa la arkaa in ay heysato Safka ugu weerarka Adag. Kooxda Real ma jiraan weli waxay xaqiijisay oo dhanka Saxiixyada ah, waxaase ka rajeynayaa in Josep Maria Bartomeu uu Safkiisa kusoo dari doono Antoine Griezmann kaasoo ...
Luis Suarez waa inuu baxaa haddii uu imaanayo Griezmann!
BARCELONA ayaa iibin doonta Geesigii kooxda Liverpool Luis Suarez – haddii ay doonayaan saxiixa Antoine Griezmann – sida ay warinayaan wararka laga helayo Spain. Keddib markii uu iska diiday kooxda Old Trafford Sanadkii hore, wiilkan oo 27-jir u dhashay dalka France ah ayaa la filayaa in uu ka dhaqaaqayo Atletico Madrid kuna biirayo Nou Camp dhammaadka xagaagan. Kooxda Barca ayaa ...
Maxay aheyd Sababta aan xalay Safka loogu soo billaabin Eden Hazard?
Antonio Conte ayaa difaaca go’aankii ay taageerayaasha Chelsea u arkeen Daciifnimada ee uu safka billowga ee kooxdiisa uga saaray Eden Hazard ciyaartii ay xalay kooxda Chelsea 1-1 la dhaafi weysay naadiga Huddersfield. Willian, Pedro iyo Alvaro Morata ayaa lagu soo billaabay safka hore ee Chelsea iyadoo weliba kooxdu ay dagaal ugu jirtay sidii ay usoo gaari laheyd Champions League. Laurent ...
Milkiilaha Liverpool oo ka hadlay Damaca Reds ay ku dooneyso Nabil Fekir iyo Ousmane Dembele
Liverpool milkiilaheeda John Henry ayaa wacad ku maray in kooxda maalgelin fiican lagu sameyn doono isagoo ka hadlay doonista kooxdiisa ee Lyon xiddiggeeda Nabil Fekir iyo wiilka Barcelona Ousmane Dembele. Warar ayaa usoo jeedinayay kooxda in ay xiiseyneyso saxiixa xiddigo dhowr ah, Axaddii ayaana la wariyay in kooxda Merseyside ka dhisan ay kula heshiisay £62m laacibka Fekir isla markaana ay ...